Why CFA Exam Prep Program at Matrix?
𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬 ဟာ SECM မှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ Finance သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)၊ Wiley Efficient Learning (WEL)၊ Corporate Finance Institute (CFI)၊ Association for Financial Professionals (AFP) အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာ Association များ၏ Official Learning Partner အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
အခုလက်ရှိတွင် CFA,FRM,CISI,FP&A,CTP,FMVA,CBCA,PMP,CITF,CDCS အစရှိသည့် Internatinal Designation Program များနှင့် Matrix Certificate Program များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ Professionals များလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Teaching Materials များ အသုံးချ၍ In Classroom Teachings နှင့် Online Learning Platform များ အသုံးပြု၍ Blended Learning စနစ်ဖြင့် သင်ကြားပို့ချနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ one of the leading finance institute တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
4 Reasons why prepare for CFA with Matrix Institute of Professionals?
1. Our Instructors!
Myanmar Finest CFA Charteredholders များနှင့် Experienced Instructors များကိုယ်တိုင် CFA Exam ကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်တင်မကဘဲ လက်တွေလုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သည် Finance Professionals တစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Skill Set များကိုပါ တစ်နေရာထဲမှာ စနစ်တကျ သင်ကြားပို့ချနေတဲ့ International Exam Prep Program တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Matrix မှာ ပင်တိုင်သင်ကြားပေးမည့် ဆရာများကတော့
𝗗𝗿. 𝗛𝗹𝗮 𝗧𝗵𝗲𝗶𝗻𝗴𝗶
Ph.D (Asian Institute of Technology)
Associate Professor (NMDC)
𝗗𝗿. 𝗖𝗵𝗼 𝗖𝗵𝗼 𝗪𝗮𝗶
Ph.D (University Malaya)
Principal, MHR Institute
𝗨 𝗠𝗶𝗻 𝗛𝗮𝗻 𝗧𝘂𝗻, 𝗖𝗙𝗔
Academic Director, Matrix Institute of Professionals
𝗗𝗮𝘄 𝗠𝗮𝘆 𝗦𝗼 𝗣𝘆𝗮𝗲 𝗡𝘆𝗮𝗻, 𝗖𝗙𝗔
Managing Director, Matrix Institute of Professionals
𝗗𝗮𝘄 𝗛𝗹𝗮𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗼𝗲 𝗢𝗼, 𝗖𝗙𝗔 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐈𝐈 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲
Financial Analyst, MX Business Advisory
𝗗𝗮𝘄 𝗧𝗵𝗮𝗲 𝗠𝘆𝗮 𝗧𝗵𝗮𝘇𝗶𝗻 𝗪𝗶𝗻, 𝗖𝗙𝗔 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐈𝐈 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲
2. License Teaching Materials and Learn anywhere, anytime
Matrix Institute of Professionals ရဲ့ CFA Exam Prep Program ကိုတက်ရောက်တဲ့ Candidate တိုင်းအတွက် Matrix ရဲ့ Global Partner တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Wiley Efficient Learning ၏ Authorized Teaching Materials များအသုံးပြုပြီး သင်ယူနိုင်မည့်အပြင့် Efficient Learning Exam Preparation Platform ကိုပါ access ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
3. Revision Inclusive Plus Extended Learning
တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ လေ့လာခဲ့သမျှစာတွေကို CFA Exam မတိုင်ခင်မှာ ပြန်လည်လေ့လာနိုင်မယ့် Revision Session များအပြင် အတန်းချိန် ၇၅% ပြည့်မှီတဲ့ သင်တန်းသားများအတွက် သင်တန်းကြေး ထပ်မံ ပေးသွင်းစရာမလိုဘဲ နောက်ထပ် ၆လ ထပ်မံသင်ယူနိုင်မယ့် Extended Learning အစီအစဉ်များ။
4. Build Professional Network + Internship Opportunity
Finance လောကကို အခုမှ စတင်ဝင်ရောက်မယ့် သူတွေ အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုလက်ရှိ Finance & Investment Fields မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Professionals တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Matrix Institute of Professionals ရဲ့ CFA Candidate တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ ဆိုတာနဲ့ အခြား CFA Candidates တွေနဲ့ အတူတူ ကိုယ်ရဲ့ Existing Professionals Network ကို ချဲ့ထွင်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းများအပြင် အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ candidate တစ်ယောက်အတွက်လည်း CFA Level I Exam Prep Program ကိုတက်ရောက်ပြီးစီးပါက Matrix Solutions Business Advisory Group မှာ intern အဖြစ်လက်တွေ Real World အလုပ်အကိုင် အတွေ့အကြုံများရယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်များရှိပါသည်။
ယခု COVID-19 ကာလတွင် Online Video Conferencing Method နှင့် Wiley Efficient Learning အသုံးပြု၍ သင်ကြားပို့ချနေလျက်ရှိပြီး နောင်တွင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ Chartered Financial Analyst Designation အတွက်လေ့လာသင်ယူချင်တဲ့ Candidate များ၊ အချိန်မအားလပ်တဲ့ Professionals များ နှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပါ Online မှ တစ်ဆင့် အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်မည့် Online Exam Prep Program များ၊ Face to Face Video Lesson များနှင့် Online Tutoring Session များဖြင့် ထိရောက်စွာ သင်ကြားပို့ချနိုင်ရန် အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Register Below For 2021 CFA Exam Prep Program
Covid-19 Learning Installment Plan (CLIP)
☎️ : 01-8245660, 09-445533288~289
🏦 : No.182-194(2nd floor),Botahtaung Pagoda Road(Between Anawrahtar & Mahar Bandoola Rd), Pazuntaung Tsp.,Yangon.